ဧရာဝတီမြစ်၏ အကြီးဆုံးမြစ်လက်တက်ဖြစ်သော ချင်းတွင်းမြစ် ကယ်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ် မုံရွာမြ? - Yangon Media Group
မုံရွာ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇
ဧရာဝတီ မြစ်၏ အကြီးဆုးံမြစ်လက်တက် ဖြစ်သော ချင်းတွင်းမြစ်အား ကယ် တင်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်သူများ အား အသိပညာပေးသည် Save the Chindwin လှုပ်ရှားမှုကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နံနက်ပိုင်းက စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့ ရှိ ချင်းတွင်းမြစ် ကျောက်ဆောင် ဆိပ်၌ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ချင်းတွင်းမြစ်သည် ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကွဲများ အဓိကထိန်းသိမ်းသင့်သည့် Hotspots 11 နေရာတည် ရှိရာဒေသလည်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ် တွင် မျိုးသုန်းပျောက်ကွယ်တော့မည့် မျိုးစိတ်ပေါင်း ၃၈ မျိုးတို့ စုဝေး ရာဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
”ချင်းတွင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသမှာ ပေါက်တဲ့တမလန်းဆိုရင် မျိုးသုဉ်း တော့မယ့် အပင်မျိုးစိတ်ပါ၊ ဒါကို တရုတ်ပြည်ကို တရားမဝင်တင်ပို့ ရောင်းနေကြတယ်။ တခြား အရေးကြီးတဲ့အပင်မျိုးစိတ်တွေ လည်း အများကြီးရှိတယ်၊ အဖိုးတန် သစ်တွေကတော့ အများကြီးရှိတယ်၊ လူတွေကစည်းကမ်းမရှိတော့ တန် ဖိုးနည်းသစ်တွေပဲ ကျန်တော့တာ၊ အဲဒါတွေကို မထိန်းသိမ်းရင် သွား ရော၊ ရွှေမျောတိုက်တဲ့မြေစာတွေကို အပင်ကြီးတွေအခြေမှာသွားပုံတော့အောက်ဆီဂျင်မရဘဲ သေ ရော၊ရွှေမျောတိုက်တဲ့နေရာမှ မြေ ပုံကြီးတွေပဲ ကျန်တော့တာ အ ပင်မရှိတော့ဘူး၊ ပတ်ဝန်းကျင် တောတွေပါ ပြုန်းကုန်တာ”ဟု အဆိုပါကမ်ပိန်းတွင် လုပ်ငန်းဖြစ် မြောက်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီအဖြစ်ပါဝင်သည့် မုံရွာတက္ကသိုလ် မှ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာ သက်နိုင်ဦးက ပြောကြားသည်။
ယနေ့ လှုပ်ရှားမှုကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ မုံရွာတက္ကသိုလ်နှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ဝှမ်း အဖွဲ့အစည်း (CRBO) တို့က ဦး ဆောင်၍ မုံရွာမြို့ချင်းတွင်းမြစ်တာရိုးတစ်လျှောက်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအင်အား ၃ဝဝ ခန့်ဖြင့် အမှိုက်ကောက် ခြင်း၊ လက်ကမ်းစာစောင်ဝေခြင်း များပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယခုလှုပ်ရှားမှုအပြင် ဒေသခံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏အင်အားကိုရယူ၍ မြစ်ဝှမ်းဒေသများရှိကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်း၍ ချင်းတွင်းမြစ်၏ အရေးပါမှုကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ဟောပြောမှုများ၊ အသိပညာပေး မှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဆီးရီးယား အစိုးရတပ်များက နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်း သူပုန်ခြေကုပ်စခန်းများကို လေကြောင်းမ??